Hamro Kantipur | "पिताको उपचारको व्यवस्था मिलेको छ भनेर आमालाई सिधै श्मशान घाट लिएर गएँ"- आदर्श "पिताको उपचारको व्यवस्था मिलेको छ भनेर आमालाई सिधै श्मशान घाट लिएर गएँ"- आदर्श
“पिताको उपचारको व्यवस्था मिलेको छ भनेर आमालाई सिधै श्मशान घाट लिएर गएँ”- आदर्श
काठमाडौं, कमेडियन आदर्श मिश्राका पिता विनोद मिश्राको मंगलबार बिहान निधन भएको छ । आदर्शले अस्पताललाई आफ्नो पिता बचाउन बिन्ती गर्दागर्दै गुमाउनु परेको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत विरगञ्जको नेस्नल मेडिकल कलेज र नारायणी अस्पतालको लापरबाहीका कारण आफ्नो पिताको मृत्यु भएको जिकिर गरेका हुन् ।
“बाबा हुनुहुन्नँ अब । मेरो बाबाको अवस्था यस्तो हुनुको पूरै जिम्मेवार म नेशनल मेडिकल कलेज र नारायणी सरकारी अस्पताललाई मान्छु । किनभने बाबालाई दुई हप्ता अघि डायलाइसिसमा लैजाँदा एसपीओटु नाइन्टी छ भनेर तपाईंको डायलाइसिस यहाँ हुँदैन भनेर हामीलाई एनएमसीबाट निकालिदिएको हो ।” आदर्श भन्छन्, “चार वर्ष मेरो बाबाले एनएमसीबाट डायलाइसिस गराउनुभएको हो । पर डायलाइसिस ३५ सय उनीहरुले सरकारबाट उठाएको हो । कमाउने बेला तिमीहरुले कमाउने, बिरामीलाई गाह्रो भएको बेला चाहिँ धपाइदिने । त्यहाँ मेसिनहरु, डायलुजरहरु केही पनि राम्रो छैन ।”
उनी भन्छन् “नेफ्रो लाइफबाट उनीहरुले कमिसन खाएर एउटा डायलाइसिसमा, एउटा डायलुजरले १२ वटासम्म डायलाइसिस गरेको छ, मेरो बाबाको । ८–९ वटा त कम्तीमा छ ।” उनी आफुसँग सबै सूची रहेको दाबी गर्छन्, गत वर्ष नारायणीमा कोभिड वार्ड बनाउँदा नारायणीको डायलाइसिस बिरामीहरुलाई एनएमसी सिफ्ट गरेको थियो । डायलुजर मेसिन नफेरेकै कारण
एक महिनाभित्र पाँचजना बिरामीको मृत्यु भएको उनाको भनाइ छ ।
उनले एनमएसीको कन्ट्र्याक्ट, डायलाइसिस मेसिनको समग्र कुराहरुको कन्ट्र्याक्ट लिएको नेफ्रो प्लसले (भारतीय कम्पनी) पैसा बचाउन धाधली गरेको पनि आरोप लगाएका छन् । “नेफ्रो प्लसले पैसा बचाउन असाध्यै धाँधली गरिरहेको छ, त्यहाँ । एनएमसी अस्पताललाई गत साता केन्द्रबाट आदेश आएको थियो । तपाईंको २० प्रतिशत बेड कोभिडका बिरामीलाई छुट्याइदिनु भनेर । अनि एनएमसीले म केन्द्रको आदेश मान्दिनँ भन्यो किनभने एनएमसीका संस्थापक बसुरुद्दीन अंसारी हो । र बसुरुद्दीन अंसारी निकै नै शक्तिशाली मान्छे हो । उहाँको गुन्डागिरी अति नै धेरै चल्छ ।” उनी भन्छन्, “उहाँलाई केरकार गर्ने कोही पनि छैन । उनी यत्ति शक्तिशाली मान्छे हुन् कि गत वर्ष केपी ओलीको ट्रान्सप्लान्टमा जति पनि खर्च भएको हो, बसुरुद्दीन अंसारीले नीजि रुपमा आफैंले त्यो खर्च व्यवहोरेका हुन् । प्रेस विज्ञप्ति निकालेर यो कुरा घोषणा नै गरिएको हो ।”
पिता गुमाउनुपरेको वियोगमा अंसारीप्रती आक्रोश पोख्दै उनी भन्छन्, “कलेजमा विद्यार्थीहरुले शुल्क बढायो, केही सुविधा छैन भनेर आन्दोलन गर्दा गुन्डा बोलाएर विद्यार्थीहरुलाई कुट्न लगायो । त्यतिसम्मको घटिया अस्पताल हो, नेशनल मेडिकल कलेज विरगञ्ज ।”
“एनएमसीको गुन्डागर्दीले गर्दा मेरो बाबा आज हुनुहुन्नँ । यसको सुनुवाई गर्ने कोही पनि छैन । कोही पनि माथि छैन । अनि छानबिन हुन्छ ? हुँदैन के । मलाई थाहा छ के । कोही पनि छैन काठमाडौंबाट आएर अनुसन्धान गर्ने कि एउटा मेडिकल कलेज चलाउनका लागि तँ योग्य छ कि छैनस् । पैसा मात्रै भएर हुन्छ ? पैसा मात्रै भएर हुने भए त पैसैको त त्यति कमी थिएन नि मलाई ।”
एनएमसीका नर्सको चरम लापरबाहीको बारेमा उनले भनेका छन्, “एउटा मेसिन बिग्रिँदा त्यहाँ काम गर्ने नर्स दिदीले फोन गरेर भाइ दुबै मेसिन बिग्रियो भनेर अफवाह फैलाउनेलाई कारवाही हुने कि नहुने ? भाइ सूचना नै निकालिसक्यो । तर सूचना आएकै थिएन, उनी बताउँछन्, “दिमागमा युरिया पुगिसक्यो उहाँको चार घण्टा डायलाइसिस गरिदिनुहोस् भन्दा डाक्टरको अगाडि चार घण्टा नम्बर सेट गर्ने र डाक्टर गइसकेपछि त्यसलाई तीन घण्टा बनाइदिने त्यसलाई । एक घण्टा घटाइदिएर तपाईंले आयु पनि घटाइदिनु भएको हो के दिदी तपाईंले । हजुरलाई छिटो घर पुग्नु थियो होला तर कोही मान्छे घर पुगेनन् । तपाईंको एक घण्टाको हतारले गर्दा कोही मान्छे घर नै पुगेनन् ।” उनी भक्कानिदै भन्छन् ।
रातभरी डाक्टरलाई गुहार्दागुहार्दै मंगलवार बिहान बुबा गुमाउनु परेको आदर्श बताउँछन् । “भरतपुर अस्पतालमा रातभरी डाक्टरलाई ‘सर, १०५ ज्वरो छ सर, बाबालाई होस् छैन सर’ ‘एसपीओटु ठिक छ भाइ, भाइटल्स ठिक छ भाइ’ ‘आइसीयूमा राखिदिनु न सर, आइसीयूमा राखिदिनु न सर’ भन्दाभन्दै बिहानको १० बजे बाबा बित्नुभयो । एसपीओटु मात्रै ठिक भएर यदि कोभिडको उपचार हुने भए त अक्सिमिटर लिएर म पनि डाक्टर हुन्थेँ नि सर । किन स्ट्यान्ड अप गरिरहन्थेँ ?, उनले भने ।
उनका पिता नगोल स्कूलको प्रधानाध्यापक थिए । “यहाँको सबैलाई सोध्नुहोस् कि उहाँ अघिको नगोल स्कूल कस्तो थियो र अहिलेको नगोल स्कूलको भवन, शौचालय कस्तो छ भनेर । केही पनि सुविधा थिएन के । मृगौला फेल भएर त्यतिसम्मको काम गर्न सक्ने मान्छे हो ।” प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिदै उनी भन्छन्, “केपी ओलीले त कुर्सी छोडिदिए हुन्छ । मेरो बाबा स्कुटरको पछाडि गएर डाएलसिस गरे तर पनि मेरो बाउले चलाएको स्कूल हेर र तिमीले चलाएको देश हेर एकचोटी । अनि लाज लाग्दैन भने मलाई भन । काम गर्न दिएनौ भन्छौ, काम गर्न कहाँ मन छ तिमीलाई ? ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै बस्ने काम हो तिम्रो । भेडाहरु पछाडि जम्मा गरेको छौ, त्यहि हुल बोकेर जतिबेला पनि भारत विरुद्धमा बोलेर, एक हूल नेपालीहरु पछि लागिहाल्छन्, त्यो सेन्टिमेन्टमा तिमीले चुनाव जित्यौ ।”
त्यसपछि बिहान १० बजे मलाई डाक्टरले बोलाउनुभयो । अनि भन्नुभयो, ‘आदर्श, हामीले जे जे गर्न सक्थ्यौं गर्‍यौं, बाबा अब हुनुहुन्नँ । ’ त्यसपछि मैले तीनवटा शब्द मात्रै भनेँ – ‘ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ ।’ त्यसपछि चुप लागेर गएर बसेँ ।
उनले बाबाको मृत्युपछि परिवारमा उनको निधनबारे ढाट्न बाध्य भएको दुखेसो गरेका छन् । भिडियोमा उनले भनेका छन्, ‘मैले धेरै ढाट्या छु घरमा । अनि यसपाली ढाट्नचाँहि जरुरी थियो । यसपाली ढाँट्दा समातिएको भए धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । मेरो ममीले भित्तामा हात हान्ने टाउको ठोक्ने गरिसक्नुभएको थियो । अहिले पनि डिप्रेसनको औषधि खानुहुन्छ उहाँ,’ उनले भनेका छन्, ‘बाबाको शव जितपुर लिएर आउनुपर्ने भयो । बाबा बित्नुभयो भन्ने थाह पाउनुहुन्छ भनेर ममीलाई ‘यहाँ भेन्टिलेटर छैन, नारायणी अस्पतालमा व्यवस्था भएको छ, त्यहाँ जाऔं बाबाको उपचार त्यहाँ हुन्छ भनेर आफ्नो बुढा गुमाएकी एक महिला मेरी आमालाई ‘तेरो बुढाको नारायणी अस्पतालमा उपचार हुन्छ’ भनेर सिधै श्मशान घाटमा लिएर गएँ ।”
बाबाको अघि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा स्ट्यान्डअप कमेडी गर्ने सपना अधुरो भएको बताउँदै उनले फेरि आफू खाँचोमा परेकाहरुको सहयोगमा जुट्ने प्रण गरे । उनले भने, ‘एनएमसी र नारायणी अस्पतालले मिलेर खाइदिए एउटा मान्छेको जीवन । अब कतिजनाको खान्छन् मलाई थाह छैन । तर, लड्न प्रयास जारी राखौं । जति जीवन बचाउन सकिन्छ, बचाऔँ, मबाट जति हुन्छ, म गर्न तयार छु ।” उनले आफुलाई १०–१२ दिनको समय चाहिन्छ बताए । बुबाको किरियाकर्महरु सकिएर बिरामीका लागि सहयोग पोस्टहरु, अक्सिजन आवश्यकता पूरा हुने उनले सो भिडियोमा उल्लेख गरेका छन् ।